Machibido Pages na WordPress iji choo nbanye | Martech Zone
Machibido peeji nke na WordPress iji chọọ nbanye
Monday, September 28, 2009 Fraịde, Ọktọba 11, 2013 Douglas Karr
Izu a, anyị na-emecha mejuputa atumatu isiokwu dị na saịtị nke ndị ahịa ma ha rịọrọ ka anyị wulite ụdị mmekọrịta ebe ụfọdụ ejiri peeji ụfọdụ edebanyere ndị debanyere aha ha. Na mbu, anyi cheere banyere itinye ihe ntinye nke ato, ma ihe ngwọta ya dikwa nfe.
Nke mbụ, anyị depụtara ndebiri peeji ahụ na faịlụ ọhụrụ (aha ọ bụla dị mma, jigide ndọtị php ahụ). N'elu ibe ahụ, jide n'aka na ị kwuru okwu na ibe ahụ ka ị wee hụ ya na nchịkọta ndebiri site na aha:
Na-esote, chọọ akara na koodu peeji gị nke gosipụtara ọdịnaya ahụ. Ọ kwesịrị ịdị ka nke a:
Ugbu a, ị ga-achọ itinye akara koodu na gburugburu ahịrị ahụ:
Naanị onye debanyere aha Anyị nwute, ọdịnaya ị na-achọ iru eru bụ naanị ndị debanyere aha.
Koodu ahụ na-amalite site na ịlele oge iji hụ ma onye ọrụ abanyela na saịtị WordPress gị. Ọ bụrụ na ha abanye, a na-egosipụta ọdịnaya ahụ. Ọ bụrụ na ha abanyeghị, ozi ahụ na-ekwu na ị na-anwa iru ọdịnaya amachibidoro.
Iji jiri peeji nke, ị ga-ahọrọ ndị Ndị debanyere aha Naanị peeji ndebiri na ngalaba dị elu nke nhọrọ nke ibe gị (na sidebar). Nke ahụ ga-egbochi ibe ahụ ndị na-agụ banyere ya.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịmasị nke ọma, ịnwere ike ịgbakwunye usoro nbanye na akara ngosi n'akụkụ gị n'akụkụ nke ọma:
">Logout /wp-login.php">Nbanye ndị ahịa
Tags: nchịkwaodeenchịkọta akụkọwee banye nabanyeụtụ magazinọdịnaya__WordPress
Newsflash: Atụmatụ dị mkpa
Sep 29, 2009 na 4: 13 AM
Ọmarịcha post… O juru m anya na nke a adịghị na nhọrọ Nzipụta.
Sep 29, 2009 na 12:45 PM
Nke ahụ bụ azịza mara mma, Doug! Ezigbo ihe atụ nke ịchọta ngwọta dị mfe, mana ọ dị irè.
Sep 29, 2009 na 1:33 PM
Aka post, nke a. Tweet peeji a. Enwere m ajụjụ n'agbanyeghị.
Ọ bụrụ na ịchọrọ igosi akụkụ nke ibe blog na ndị ọbịa niile, mana ọ bụ naanị ndị debanyere aha ya?
Sep 29, 2009 na 1:50 PM
Nke ahụ ga - adị mfe - ịnwere ike ịgbakwunye otu usoro ahụ na nkụnye eji isi mee nke ibe ahụ ma kwuo n'ụzọ doro anya… ma ọ bụrụ na (ọ dịghị onye ọrụ ya na ibe ya na pagename) ma tinyezie ya na peeji nbanye.
Jul 16, 2010 na 4:24 PM
nnukwu ihe ngwọta! naanị ihe m chọrọ, achọrọ m ịtụle usoro mbanye nke mpụga.
Feb 21, 2011 n’elekere 1:04 nke abali
Nke a abughi onye ọrụ enyi maka ndị na-amụ ihe. Ọ bụghị onye ọrụ enyi na enyi ma ọlị !!!!
Ọkt 30, 2011 na 12:04 AM
O doro anya na ederedeghị nke a n'uche maka ọhụrụ ahụ. Ndo Devs_mum!
Jenụwarị 16, 2012 na 10:14 PM
Ọ bụghị onye ọrụ enyi na enyi ma nke ahụ bụ mma… Ọ dị m ka ụfọdụ foto nke ihe m kwesịrị ime ga-enyere aka. Ma ọ bụghị… Ana m na-aga na-agbalị stof til ọ na-arụ ọrụ!
Ọkt 11, 2013 na 1:40 AM
Detuo page.php, Kpọgharia aha peeji2.php ma tinye koodu dị n'elu, chekwaa faịlụ, bulite azụ na ọdịnaya / isiokwu / ihe ọ bụla akpọrọ, gaa na post ma ọ bụ peeji nke gbanwere ndabara peeji nke ndabara na peeji2.php. Enweghị mkpa ịmepụta ụdị peeji / usoro ọhụụ naanị copyomie nke ị na-eji ma nyegharịa ya. ya mere fullwidth.php bu fullwidth2.php na mfe.
Jenụwarị 16, 2012 na 11:57 PM
Ọ dị mma mgbe ọtụtụ mgbalị na ikiri nkuzi ndị ọzọ na ịntanetị… Achọpụtala m na MGBE ịmegharị ndebiri ọhụụ bụ nsogbu m. M na-eme otu na a ederede editọ na-agbalị bulite ya… ebe? Amaghịdị m ebe m ga-aga. Enweghị m ike ịchọta ebe nzuzo a iji bulite!
Jan 17, 2012 na 12: 27 AM
N'ihi ya, ezi, LaRocque! Ikwesiri inwe mmemme FTP ma nweta ebe nchekwa isiokwu weebụ gị ka ị nwee ike bulite faịlụ ahụ. Enweghị ụzọ ọ bụla ugbu a iji mee ya site na nhazi nchịkwa. Otu ihe dị iche ga-abụ ịwụnye ngwa mgbakwunye "Njikwa faili" nke na-enye gị ohere ịme faịlụ ọhụrụ. Ma, kpachara anya!
Aug 3, 2011 na 1:14 PM
Ma ọ bụ naanị jiri - ọ dịghị mkpa ịkwanye ihe onye ọrụ niile.
Ọkt 30, 2011 na 12:03 AM
Nwere ike maa dị nnọọ elele maka ma a onye ọrụ ite na; Agbanyeghị, usoro akọwapụtara n'elu ga-emecha nye gị ohere iji ogo ikike ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịhazi ọkwa!
Jan 25, 2012 na 6: 47 AM
Ọ D MMA, yabụ m ga-ata ahụhụ… Kedụ ka ị ga - esi gbanwee nke a iji nye ikikere nnabata?
Ka anyị kwuo - anyị ka chọrọ ikwe ka onye ọ bụla mepụta aha njirimara nke ha "Subscriber", ma zaghachi nzaghachi.
Ma - anyị na-enye ohere maka ibe "naanị ndị debanyere aha" naanị ndị ọrụ akọwapụtara site na ha?
Feb 23, 2012 n’elekere 12:22 nke abali
Ọnye na -bụ Ryan Candela?
Douglas - Ejiri m koodu gị - ma n'ọtụtụ akụkụ ọ na-arụ ọrụ dị ukwuu! Okwu m nwere bụ na njikọ Logout laghachi na saịtị na-adịghị adị. Agbalịrị m ọtụtụ koodu ntinye ederede site na gburugburu weebụ iji mee ka koodu mpụta rụọ ọrụ. . . mana onye ọrụ ahụ ka na-abanye na nlọghachi bụ //wp-login.php?redirect_to= “>log%20in%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% nke 20% 20%
Ọ dị ka ọ nwere ike ịbụ na mgbe edere koodu ahụ site na ihe nchọgharị gị, ọ gbakwunye ụyọkọ oghere HTML, Ryan. Detuo koodu a na Notepad ma ọ bụ Textpad wee detuo ya n'ime ndebiri gị iji kpochapụ ihe ahụ.
Mee 1, 2013 na 3: 44 PM
Ok nke a bụ kpọmkwem ihe m kwesịrị ịme mana enwere m otu ajụjụ. Ọ bụrụ na ha abụghị onye debanyere aha, kedu ka m ga - esi mee "banye" ma ọ bụ "denye aha" igbe ka ha nwee ike ịnweta ọdịnaya ahụ?
Mee 1, 2013 na 11: 14 PM
Nwere ike tinye a njikọ mgbe ọzọ na nkwupụta ebe anyị nwere “Na na na…” n'elu.
Ọkt 11, 2013 na 1:44 AM
Daalụ maka koodu. ga-eme ka ndị mmadụ were m iwe, mana ha na-eche na nbanye mgbe ha chọrọ ụfọdụ ihe agaghị ekwe ka mmadụ niile nweta ohere ịme faịlụ ahụ mfe ịchọta.
Jenụwarị 31, 2014 na 11:43 PM
Ọ na-ada ka usoro a bụ isiokwu hijacking oge. A ga-agbakwunye kuki nbanye mgbe ọ nọ na mpaghara echebere mana ebe ọ bụ na wordpress na-eje ozi dị ka kuki na-enweghị nchekwa, a ka ga-arụ ọrụ ma ọ bụrụ na onye ọrụ na-agagharị na akụkụ nke saịtị ahụ ezighi ezi.
Feb 1, 2014 n’elekere 1:35 nke abali
Nke a abụghị mbanye anataghị ikike, ọ na-eji ọrụ WordPress API - ọ gaghị agabiga nchebe ọ bụla ma ọ bụ nweta oge ma ọ bụ kuki ozugbo.
Apr 12, 2015 na 4: 25 PM
daalụ ejiri mee ihe ma ọ bụrụ na nkwupụta iji mee akpa div ma ọ bụrụ na onye ọrụ bụ onye otu
azịza gị dị mma